ကြားသိရသမျှ Archives - Page 39 of 42 - Achawlaymyar
နေပူပူကွင်းပြင်မှာ နှမ်းသိမ်းဆည်းနေချိန် တစ်မိသားစုလုံး မိုးကြိုးပစ်ခံရတာတဲ့
June 8, 2020 by Achawlaymyar
မြင်းခြံတွင် တလင်းပြင် နှမ်းသိမ်းနေသည့် မိသားစုဝင် ငါးးဦး မိုးကြိုးပစ်ခံရပြီး သုံးဦးသေဆုံး မြင်းခြံမြို့နယ် မြောက်ကျွန်းကျေးရွာတွင် ရွာအပြင်ဘက် တလင်းပြင်၌ နေလှန်းထားသည့် နှမ်းများ ရုတ်သိမ်းနေသည့် မိသားစုဝင်ငါးဦး မိုးကြိုးပစ်ခံရသဖြင့် သုံးဦးသေဆုံးပြီး တစ်ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု ဇွန်(၆)ရက် ညနေပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ရွာအပြင်ဘက်ရှိ နှမ်းတလင်းတွင် မိသားစုဝင် ငါးဦး နှမ်းသိမ်းနေစဉ် မိုးမရွာ၊ လေမတိုက်ဘဲ လျှပ်စစ်ကြောင်းကျကာ မိုးကြိုးပစ်ခံရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ကျေးရွာမှ ဒေသခံများက ပြောသည်။ မိသားစုဝင် ငါးဦးအနက် တစ်ဦး မိုးကြိုးစက်ကွင်းလွတ်ပြီး လေးဦး မိုးကြိုးထိမှန်ခံရကြောင်း၊ သေဆုံးသူ သုံးဦးမှာ သားအမိနှစ်ဦးနှင့် တူတော်စပ်သူတို့ဖြစ်ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူမှာလည်း သားအငယ်ဆုံးဖြစ်ကာ လက်ရှိတွင် မြင်းခြံဆေးရုံသို့ တင်ပို့ထားရသည်ဟု ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့သလို သေဆုံး၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများကို … Read more
လုပ်​ရက်​ပါ​ပေ့ ​မေ​မေရယ်​ . . . တိုက်​ကြီး​ဈေးထဲတွင်​ ​တွေ့ရှိ​သော ကေ​လးအား ပိုင်​ရှင်​​တွေထံ ပြန်​အပ်​လိုက်​ပါပြီ..
တိုက်​ကြီး​ဈေးထဲတွင်​ ​တွေ့ရှိ​သော ကေ​လးအား ပိုင်​ရှင်​​တွေထံပြန်​အပ်​လိုက်​ပါပြီ၊ လုပ်​ရက်​ပါ​ပေ့ ​မေ​မေရယ်​ ဟု သမီး​လေးက ပြန်​​ပြောလိုက်​ခြင်​​ပေနဲ့ က​လေးက မ​ပြောတတ်​၊ တိုက်​ကြီးမြို့မ​ဈေးထဲတွင်​ ၂နစ်​ခွဲခန့်​ က​လေးမ​လေးတစ်​​ယောက်​ ၆.၆.၂၀၂၀ ရက်​​နေ့ နံနက်​ ၆း၃၀ နာရီခန့်​က​ကောက်​ရထား​ကြောင်း မိဘများသိရှိရန်​ အွန်​လိုင်း​ပေါ်မှာတင်​ခဲ့ပါသည်​။ ၇.၆.၂၀၂၀ ရက်​​နေ့တွင်​ အမျိုးသမီးတစ်​ဦး ​ဈေးရုံးသို့​ရောက်​ရှိလာပြီး တာဝန်​ရှိသူများနှင့်​​တွေ့ဆုံကာ က​လေးနှင့်​ဘာ​တော်​သလဲဟု​မေးရာ က​လေးမိခင်​ဟု​ပြောပါသည်၊ က​လေးမိခင်​မှ ​”က​လေးအား​နောက်​မှာထားပြီး ​ဈေးဝယ်​ရင်း​ပျောက်​သွားသည်​ “ဟု​ပြောပါသည်​။ က​လေးမ​လေးစ​တွေ့စဉ်​ ​ဈေးသယ်​များမှ က​လေးမ​လေးအား​မေးကြည့်​ရာ “အရုပ်​သွားဝယ်​​ပေးမယ်​ ဒီမှာ​နေဟု”မိခင်​မှ​ပြောခဲ့​ကြောင်း ​ပြောပြသည်​။ ထိုအချိန်​တွင်​ ဖုန်းဝင်​လာရာ “က​လေးမိခင်​ဟာ ကျွန်​မတို့ပါ အခုတိုက်​ကြီးကိုလာ​နေပါပြီ” ​ပြောသဖြင့်​​စောင့်​ဆိုင်းပြီး၊ ​ရောက်​လာ​သောအခါ မိခင်​နှစ်​ဦးမျက်​နှာချင်းဆိုင်​ ​ဖြေရှင်းကြရာပထမ​ရောက်​လာ​သော အမျိုးသမီးမှာ က​လေးမိခင်​အရင်းဖြစ်​ပြီး မ​အေးသီတာဖြစ်​ပါသည်​ စပါးကိုင်း​ကျေးရွာမှဖြစ်​​ကြောင်း၊မ​အေးသီတာသည်​ အိမ်​​ထောင်​ နှစ်​ဆက်​ဖြစ်​ပြီး၊ယခုက​လေးမ​လေးမှာ ပထမအိ်​မ်​​ထောင်​နှင့်​​ ​မွေး​သောက​လေးဖြစ်​​ကြောင်း၊​က​လေးအား … Read more
လူရမျးကားတဈယောကျကွောငျ့ “မှေးမှိနျသှားတဲ့ အိပျမကျတှေ “
“မှေးမှိန်သွားတဲ့ အိပ်မက်တွေ ” သူက YBS 40 နဲ့တိုက်မိတဲ့ တက္ကစီယာဉ်မောင်းရဲ့အမျိုးသမီး။ စကားကို ဖွဲ့နွဲ့လည်းမပြောဘူး။ ခံစားချက်ကိုလည်း ဖွင့်ဟမပြောတတ်ဘူး။ သူ့ယောက်ျား ယာဉ်မတော်တဆဖြစ်ပြီးသေတာလည်း အခုချိန်ထိ လက်မခံနိုင်သေးဘူး။ ကျမသူ့အိမ်ရောက်သွားတော့ သားငယ်လေးကို နို့တိုက်နေတယ်။ သားအကြီးက တခြားအိမ်မှာသွားကစားနေတယ်တဲ့။သူ့ကို စိတ်ပြေလက်ပျောက် လွှတ်ပေးထားတယ်တဲ့။ ၆ နှစ်အရွယ်သားကြီးက အဖေမှန်းသိတတ်နေပြီဆိုတော့ ဖုန်းလာတိုင်း အဖေ့ဖုန်းလားမေးနေလို့ အဖြေရခက်ပြီး ညာပြောထားရတယ်တဲ့။ သားအငယ်ကတော့ အဖေမှန်းသိတတ်ကာစ ။ အဖေဖြစ်သူ အိမ်တံခါးဖွင့်ရင် ကြိုနေကျ။ အခုတော့ တံခါးကနေ ဝင်လာသမျှလူကို သူ့အဖေကို လက်ညိုးထိုးသလိုထိုးနေတယ်။ ကျမနဲ့စကားပြောတုန်း သူတရေးနိုးမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ပြီး ကျမကိုလက်ညိုးထိုးပြီးပြန်အိပ်ပျော်သွားတယ်။ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ကိုကျော်ဇောက သူ့သားတွေကို ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့တင်ပြီး ကျောင်းကောင်းကောင်းမှာထားနိုင်ဖို့်၊ သားတွေကို ရှင်ပြုပေးဖို့ပြောနေကျတဲ့။ ကိုကျော်ဇောက ရိုးသား၊ ကြိုးစားတယ်။ အငှားယာဉ်မောင်းတွေထဲမှာ … Read more
တက္ကစီကားပိုင်ရှင် ပြောပြလာတဲ့ YBS (၄၀) ယာဉ်တိုက်မှုမှာ ဆုံးပါးသွားတဲ့ ယာဉ်မောင်းလေးရဲ့ ဘဝ . . ./
June 7, 2020 by Achawlaymyar
တက္ကစီကားပိုင်ရှင် ပြောပြလာတဲ့ YBS (၄၀) ယာဉ်တိုက်မှုမှာ ဆုံးပါးသွားတဲ့ ယာဉ်မောင်းလေးရဲ့ ဘဝ ကျနော်တို့ ကံကောင်းပါရစေ…ကျနော်စာမရေးဖြစ်တာကြာပြီ။ Covid 19 ကပ်ရောဂါကြောင့် ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် ကမ္ဘာနှင့်အ၀ှမ်းစိတ်မချမ်းမြေ့ဘွယ်ရာဖြစ်နေကြချိန် စာရေးချင်စိတ်မရှိဖြစ်နေတာ။ ကျနော့စာဖတ်ပီးရင်လည်း အသိမိတ်ဆွေတွေက၀မ်းနည်းကြေကွဲရကြောင်း ပြန်ကြားရတော့ရေးချင်ပေမဲ့မရေးဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ အခုတော့ရေးရပါပြီ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေးရက်က ရန်ကုန်မြို့ ဆင်မလိုက်အနီး ဘူရင့်နောင်လမ်းမကြီးပေါမှာ YBS 40 Bus နဲ့ တိုက်မိပြီး လူ ၃ ဥိးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ Taxi FF-2574 ပိုင်ရှင်ဟာ ကျနော်ဖြစ်နေခဲ့လို့ပါဘဲ။ ကျနော် ယူကြုံးမရ နှမြောဝမ်းနည်း စွာဖြင့်ဘဲ ဒီစာကိုရေးရပါတော့မယ်။ မှတ်မှတ်ရရ ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့ မနက် ၇ နာရီကျော်လောက်မှာ ကျနော်အိမ်ဖုန်းမှာ call ထ၀င်လာပါတယ်။ ကျနော်အိပ်ယာဝင်နောက်ကျတော့ မထချင်ထချင်နဲ့ … Read more
မိုးရွာပြီးတဲ့အချိန် ဗွက်အိုင်ထဲမှာ ဆော့ကစားနေတဲ့ ကလေးငယ်ကို မိခင်ဖြစ်သူက ရိုက်ဖို့ တုတ်ကိုင်ပြီး သွားလိုက်သောအခါ . . ./
မိုးရွာပြီးတဲ့အချိန် ဗွက်အိုင်ထဲမှာ သူကစားနေတာပေါ့။ဗွက်အိုင်ထဲမှာ ဆင်ကြီးလို လေးဖက်ထောက်ကြီး တွားသွားလိုက်၊ဗွက်တွေကို ဖင်ခုထိုင်လိုက်နဲ့။ ပုစွန်လုံးပေါက်လေးတွေကို ဖမ်းလိုက်၊ပြန်လွှတ်လိုက်နဲ့ အလုပ်တွေရှုပ်။ သူ့ဘာသာသူ သဘောတွေကျပြီး တခစ်ခစ်ရယ် နေတတ်သေးတာ။သူဘာလို့ အဲဒီလောက်ပျော်နေပါလိမ့် ဆိုတာကျွန်တော်မသိ။သူကတော့ ‌ဘယ်သူ့မှဂရုစိုက်ဘဲ ပျော်နေတာပဲ။ မကြာပါဘူး။ သူ့အမေက တုတ်ကြီးကိုင်ပြီးလာတော့တယ်။ကျွန်တော်တို့အနားမရောက်ခင်ကတည်းက သူ့ကိုကြိမ်းလာတာ။ သူ့မျက်နှာမှာ ခုနကပျော်နေတာတွေ ဘယ်ပျောက်သွားမှန်းမသိ။မျက်နှာက ညှိုးလာတယ်။မျက်လုံးကလေးတွေကိုကြည့်တော့ ကြောက်နေမှန်း သိသာတယ်။ “နင်လာစမ်း၊အဲဒီဗွက်တွေထဲမှာ ဘာလုပ်နေတာလဲ။”သူ့အမေကခေါ်နေပေမဲ့ သူက ချက်ချင်းမသွားဘူး။ထိုင်လျက်ပဲ။ သူ့အမေ ပိုပြီးဒေါပွလာပြီ။ “ဟဲ့၊ငါပြောနေတာမကြားဘူးလား။” ပြောလည်းပြော သူ့အနားလည်းရောက်သွားပြီး ရိုက်မယ်လို့တုတ်ကိုလှမ်းအမြှောက်မှာ ကျွန်တော်က “အစ်မ”လို့ ခေါ်လိုက်တယ်။ သူ့အမေက သူ့ကို မရိုက်မိလိုက်ဘူး။ ကျွန်တော့်ကိုလှည့်ကြည့်တယ်။ကျွန်တော်က “ဘာဖြစ်လို့ ကလေးကို ရိုက်မှာလဲ”လို့မေးလိုက်တယ်။ သူ့အမေ ကြောင်သွားတယ်။ “နင်မမြင်ဘူးလား။သူ ဗွက်ထဲမှာ ကမြင်းကြောထနေတာ”တဲ့။ “အဲဒါကြောင့် ရိုက်မှာလား။” … Read more
“ဖေ့ဘွတ်မှာ ချစ်သူဖြစ်ခဲ့တဲ့ကောင်မလေးကို သွားတွေစဉ် ကောင်မလေးက တစ်ခြားတစ်ယောက်နဲ့ အီစီကလီလုပ်နေလို့ ကတ်ကြေးနဲ့ ထိုးသတ်”
လှည်းကူးမြို့ အောင်မဂ်လာရပ်ကွက်အပိုင် သီတာအေး ၂ လမ်း လူသတ်မှု (6.6.2020) လှည်းကူးမြို့နယ် အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက် သီတာအေး(၂)လမ်း နေအိမ်တစ်ခုအတွင်း အမျိုးသမီးအလောင်းတစ်လောင်းအား ဒဏ်ရာများဖြင့် 3.6.2020ရက်နေ့တွင် တွေ့ရှိရသဖြင့် လှည်းကူးမြို့မရဲစခန်း (ပ)အမှတ်1164/2020 အမှု့ကြီးပုဒ်မ302ဖြင့် အမှု့ဖွင့် စုံစမ်းခဲ့ ပြစ်မှုကျူးလွန်သည်ဟု ယူဆရသည့် မသင်္ကာတရားခံအား မူခင်းနှိမ်နှင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ မြောက်ပိုင်း ခရိုင်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ လှည်းကူးမြို့မရဲစခန်းမှူး ဦးစီးအဖွဲ့တို့မှပေါင်းစပ်ညှိနိုင်းဖော်ထုတ်ခဲ့ရာ တရားခံဟုယူဆရ​သော ပိုင်လင်းထွန်း(ခ)ပိုင်ပိုင် (20)နှစ်(ဘ)ဦးတင်ထွန်း ကျုံကဒွန်းကျေးရွာ ဖျာပုံမြို့နယ်နေသူအား လှိုင်သာယာအရှေ့ပိုင်းမြို့နယ် အဆောင်တစ်ခုမှ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့။ ( ကနဦး ဖေါ်ထုတ်သိရှိရချက်) ၎င်းအား fbပေါ်မှ သိကျွမ်းခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့ပြီး ချစ်သူများဖြစ်သွားခဲ့ကြောင်း၊ မဖြစ်မီ ၂ ပတ်အလိုက ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊အခင်း​ဖြစ်နေ့က နေအိမ်သို့ အလည်ရောက်ရှိခဲ့ပြီး အတူရှိနေစဉ် သေဆုံးသူအမျိုးသမီးမှာ fbလိုင်းသုံးနေပြီး ယခင်သူနှင့်ပါတ်သက်ခဲ့သူများနှင့်ချစ်ကြည်နူးနေသဖြင့် ၎င်းက မဆက်သွယ်ရန်ပြောသော်လည်း … Read more
မိဘကို ခွေးနဲ့ နှိုင်းလို့ ကိုယ်တိုင် ခွေးဖြစ်သွားတဲ့ လပွတ္တာက မခင်လှ အကြောင်း. . .(ဖြစ်ရပ်မှန်)
မိဘ ကို ခွေး နဲ့ နှိုင်း လို့ ကိုယ် တိုင် ခွေးဖြစ်သွားတဲ့ လပွတ္တာက မခင်လှ အကြောင်း (ဖြစ်ရပ်မှန်) အချိန် ကား… ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၃၆၄ခုနှစ် – သူ့အမည်က မခင်လှ အသက်က ၁၆နှစ်/၁၇နှစ်အရွယ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အပျိုအရွယ် မိန်းကလေး ဖြစ်သော်လည်း စရိုက်က ကြမ်းတမ်းလွန်းလှ၏။ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ခြင်း မရှိ။ တစ်ဦးတည်းသောသမီး ဖြစ်သည်မို့ အလွန်ဆိုး၏။ မိခင်ဖခင်တို့အား ရိုသေကိုင်းရှိုင်းမှု မရှိ။ အမြဲတစေ အော်ငေါက် ဆက်ဆံလေ့ ရှိသတဲ့။ ထို့ကြောင့်ပင် မခင်လှသည် လက်ရှိဘဝမှာပင် တစ်မြို့လုံး၊ တစ်နယ်လုံး အုန်းအုန်းကျွက်မျှ အံ့ဩစရာ၊ သနားစရာ၊ သံဝေဂ ရစရာ ကောင်းလောက်အောင် အဖြစ်ဆိုးနှင့် ရင်ဆိုင်တိုးခဲ့ရလေတော့၏။ ထိုနေ့က… … Read more
နင့်စကပ်ကို အပေါ်နည်းနည်းတင်ပေးရင် ပိုက်ဆံ တစ်သောင်းပေးမယ် ဆိုတဲ့ လူပျိုကြီးကို ပညာပေးလိုက်တဲ့ ကောင်မလေး။
နင့်စကပ်ကို အပေါ်နည်းနည်းတင်ပေးရင် ပိုက်ဆံ တစ်သောင်းပေးမယ် ဆိုတဲ့ လူပျိုကြီးကို ပညာပေးလိုက်တဲ့ ကောင်မလေး ကားပေါ်မှာ လူပျိူကြီးနဲ့ကောင်မလေး အတူတူဆုံတော့ ကောင်မလေးက သူ့ခြေသလုံးဝင်းဝင်းလေးကို မမြင် မြင်အောင်ပြတယ်။ အဲဒီမှာ လူပျိူကြီးက အတင့်ရဲပြီး …” နင့်စကပ်ကို အပေါ်နည်းနည်းတင်ပေးရင်ပိုက်ဆံ တစ်သောင်းပေးမယ် ” ဆိုတော့ …. ကောင်မလေးက ပိုက်ဆံကို တခါတည်းတောင်းပြီးစကပ်ကို အပေါ်တင်ပေးတယ်။ နောက် …ညု တုတုနဲ့ကြည့်ပြီး ကောင်မလေးက ….” ရှင် နောက်ထပ်တစ်သောင်းထပ်ပေးရင် …ရှင့်ကို ကလေးမွေးတဲ့နေရာ ပြမယ် “” ဟာ ” …. လူပျိူကြီး တံတွေးသီးသွားပြီး ပိုက်ဆံ တစ်သောင်းကိုလည်း လျှောလျှောလျူ လျူ ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ကောင်မလေးက ကားရဲ့ ညာဘက်ခြမ်းကို လက်ညိုးထိုးပြလိုက်တယ်။ ” … Read more
အဆိုတော်လွမ်းမိုး အသစ်တဖန် အသက်ပြန်ရှင်လာသလားလို့တောင် ပြောကုန်ကြပီး..
လွှမ်းမိုး ပြန်လာပြီ အဆိုတော်လွမ်းမိုး အသစ်တဖန် အသက်ပြန်ရှင်လာသလားလို့တောင် ပြောကုန်ကြပီး သူကတော့ အေးမြသာယာမှာဘဝပေးမကောင်းလို့ရေးထမ်းရောင်းနေရတဲ့ဘဝသ မားလေး #ကိုမျိုး တဲ့ အားပေးလျှက် အေးမြ #HlwamMoeHlaing (ခတ္တ )#ဘန်ကောက် Credit . Ro Se ပဲခူးတိုင်းအ​နောက်​ခြမ်း အုတ်​ဖိုမြို့နယ်​ အေးမြသာယာမြို့ ကပါ unicode version လှမျးမိုး ပွနျလာပွီ အဆိုတျောလှမျးမိုး အသဈတဖနျ အသကျပွနျရှငျလာသလားလို့တောငျ ပွောကုနျကွပီး သူကတော့ အေးမွသာယာမှာဘဝပေးမကောငျးလို့ရေးထမျးရောငျးနရေတဲ့ဘဝသ မားလေး #ကိုမြိုး တဲ့ အားပေးလြှကျ အေးမွ #HlwamMoeHlaing (ခတ်တ )#ဘနျကောကျ Credit . Ro Se ပဲခူးတိုငျးအ​နောကျ​ခွမျး အုတျ​ဖိုမွို့နယျ​ အေးမွသာယာမွို့ ကပါ
ကလေးငယ်လေးရဲ့ အိပ်မက်အရ ရှာဖွေရာမှ ရှေးဟောင်း ဘုရားဆင်းတုတော်များ တွေ့ရှိ
ကလေးငယ်လေးရဲ့ အိပ်မက်အရ ရှာဖွေရာမှ ရှေးဟောင်း ဘုရားဆင်းတုတော်များ တွေ့ရှိ တနသာင်္ရီတိုင်း မြိတ်ခရိုင် ကျွန်းစုမြို့နယ် ကျွဲခရန်ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ကမာချောင်းကျေးရွာတွင် 6.6.2020 ရက်နေ့တွင် ကမာချောင်းရွာတွင်နေထိုင်သောခလေးငယ်တစ်ဦးမှာ အိပ်မက်ရလို့တောထဲကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ် အဆိုပါနေရာတွင် ရှေးခေတ်ကလို့ဆိုနိုင်တဲ့ဘုရားများပေါ်ထွက်နေရာ တွေ့ရသည့် ခလေးငယ်ဟာ မြင်တွေ့ရသောဘုရား ၂ ဆူကိုအိမ်သို့အရင်ပင့်ဆောင်ပြီးနောက် ကျန် ၁၂ ဆူကိုပြန်လည်သွားရောက်ပင့်ဆောင်ခဲသည်။ ယခုအခါမှာပင့်ဆောင်လာသောဘုရားများကိုခလေးငယ်၏နေအိမ်တွင်ထားရှိခဲပါသည် ခလေးငယ်ဟာနောက်ဘုရားများကိုလဲပြန်လည်တူးဖော်ပေးဦးမည်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားဖူများလဲသွားရောက်ဖူးမျှော်နိုင်ပါကြောင်းအသိပေးနိုးဆော်အပ်ပါသည်။ ပြန်လည်မြဝေပေးပါ မျိုးဆက် ပိုင် Unicode ကလေးငယျလေးရဲ့ အိပျမကျအရ ရှာဖှရောမှ ရှေးဟောငျး ဘုရားဆငျးတုတျောမြား တှရှေိ့ တနသာင်ျရီတိုငျး မွိတျခရိုငျ ကြှနျးစုမွို့နယျ ကြှဲခရနျကြေးရှာအုပျစုရှိ ကမာခြောငျးကြေးရှာတှငျ 6.6.2020 ရကျနတှေ့ငျ ကမာခြောငျးရှာတှငျနထေိုငျသောခလေးငယျတဈဦးမှာ အိပျမကျရလို့တောထဲကိုသှားရောကျကွညျ့ရှုခဲ့ပါတယျ အဆိုပါနရောတှငျ ရှေးခတျေကလို့ဆိုနိုငျတဲ့ဘုရားမြားပျေါထှကျနရော တှရေ့သညျ့ ခလေးငယျဟာ မွငျတှရေ့သောဘုရား ၂ ဆူကိုအိမျသို့အရငျပငျ့ဆောငျပွီးနောကျ … Read more